Yohane 16 NA-TWI - Awerɛhow ne anigye wɔ yɛn anim - Bible Gateway
Yohane 15Yohane 17
Yohane 16 Nkwa Asem (NA-TWI)
16 “Maka eyinom nyinaa akyerɛ mo na moatumi agyina hɔ pintinn. 2 Wɔbɛpam mo afi wɔn asɔredan mu. Na bere bi bɛba a obiara a obekum mo no besusuw sɛ, sɛ ɔyɛ saa a, na ɔresom Onyankopɔn. 3 Wɔde saa nneɛma yi bɛyɛ mo, efisɛ, wonnim Agya no na me nso wonnim me. 4 Nanso maka eyi akyerɛ mo sɛnea ɛbɛyɛ a, sɛ bere no du a, mobɛkae nea meka kyerɛɛ mo no. Mfitiase no, manka eyi ankyerɛ mo, efisɛ na meka mo ho.